नन्दरामले ल्याए तिहार भैलेनी गीत युट्युवमा हिट हुँदै ! – ताजा समाचार
नन्दरामले ल्याए तिहार भैलेनी गीत युट्युवमा हिट हुँदै !
हिम सम्झौता डिजिटल प्रालिको प्रस्तुतीमा कलाकार नन्दराम परियारको ‘आयो तिहार भाग ६’ ‘आँगनमा भैलिनि’ बजारमा आएको छ ।हरेक बर्ष तिहारमा आफ्नो छुट्टै प्रस्तुतसहितको गीत बजारमा ल्याएर दर्शक,श्रोताको मन जित्न सफल कलाकार परियारको यो बर्षपनि तिहार बिशेष गीत बजारमा आएको हो ।
भिडियोसहित बजारमा आएको गीतमा तिहारमा खेलिने देउसी र भैलोलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ देखाईएको छ । तिहारको बिशेष महत्व भाईटिका संगै देउसी, भैलेलाई पनि मानिन्छ ।
चारैतिर झिलीमीली बत्ती, रंगीचंगी फुलहरु साथमा देउसीभैलोले छुट्टै रौनकता छाएको हुन्छ । साना बालबालिकादेखि बृद्धसम्मले देउसीभैलो खेलेर तिहारमा रमाईलो गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
चर्चित मोडल ध्रुव हिमाली र सुप्रिया कटुवाल, जीत सारु, र सर्मिला अधिकारीको दमदार नृत्य तथा अभिनय रहेको उक्त गीतमा घरबेटीलाई बिभिन्न तरिकाले सम्बोधन गर्दै रिती, संस्कृति र परम्परालाई समेटेर रमाईलो भैले भट्टयाइएको पनि छ ।
खुमन अधिकारी र समिक्षा अधिकारीको सुमधुर आवाज रहेको छ । यस्तै गीतमा कलाकार परियारको शब्द रहेको छ भने बिष्णु न्यौपानेको संगीत रहेको । गीतलाई पछिल्लो समय निकै व्यस्त र लोकप्रिय मानिएका मौसम हिमालीले निर्देशन गरेका छन् ।
गीतलाई हिम सम्झौता डिजिटलको अफिसिएल युट्युव च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । हरेक बर्ष तिहारमा आफ्नो प्रस्तुती बजारमा ल्याएर दर्शक, श्रोताको मन जित्दै आएका कलाकार परियारले यो गीतलाईपनि मन पराईदिनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।